Joinha Timu Hodges U! Wona Mikana Yedu Yebasa
Wakagadzirira Kujoinha Iyo Inotevera Nhanho MuPamusoro Dzidzo?
KuHodges University, isu takazvipira kuhaya chete yakanakisa fakaroti nevashandi kutsigira vadzidzi vedu munzira yavo yekubudirira. Kana iwe uine shungu yekubatsira vamwe kuzadzisa zvinangwa zvavo, saka tinokuda iwe kuchikwata chedu. Kana izvi zvikaita kunge iwe, sarudza mumwe wemikana yedu yebasa uye tumira CV yako.
Iva Anokurudzira. Joinha timu yeHodges University nhasi!
Tsvaga Mikana Yebasa
About Hodges Basa
Kukurukurirana naGloria Wrenn, Director weHuman Resources:
Ndeipi Chinhu Chakanakisa Nekushanda paHodges University?
"Zvikonzero zvitatu zvepamusoro zvingave:
Vanhu vanoshanda pano. Hodges kune vazhinji imhuri yechipiri, uye handisati ndamboona vanhu vazhinji vaine shungu dzakadai uye vachishanda nesimba pamwe chete pachinangwa chakajairika chekuita Hodges yunivhesiti yepamusoro kwete chete muSW Florida, asi chero kupi.
Tine vanhu vakasiyana-siyana uye vanobatanidza vashandi zvakare - munhu wese pano ari kubva kune imwe nzvimbo - uye ndinofunga nekuda kwekuti vashandi vari kutambira vanhu kubva kune dzimwe tsika kana mamiriro.
"Isu tiri sangano rine hunyanzvi nematauriro atinoita vadzidzi, uye tave nzvimbo inoshanduka-shanduka uye inogona kukurumidza kuchinja sezvinodiwa neyunivhesiti kana nedzidzo yepamusoro."
Ndeapi mamwe mabhenefiti ebasa naHodges U?
“Hodges University iri pakambasi yakanaka muzuva reFort Myers, Florida, haina fodya, uye yakawana Blue Zone Kubasa kudomwa, (yekutanga dzidzo yepamusoro kuita kudaro mudunhu) iyo inokurudzira tsika dzakanaka. Pamusoro pezvo, mabasa ese enguva yakazara anosanganisira mabhenefiti erupo ayo anogona kusanganisira mabhenefiti ehutano, inishuwarenzi, uye kuregererwa pachikoro.
Ruzivo neVashandi Zviitiko
Ndeipi chakanakisa chinhu nezvekushanda pano?
“Kuona hupenyu hwevadzidzi kuchichinja. Zvinoita chete kuti zvese zvandinoita pano zvive nechinangwa, ” Teresa Araque, AVP Kushambadzira / Ruzhinji Ruzivo ruzivo
“Mhuri. Ndine mhuri yangu "yekumba" uye yangu "yebasa" uye ini handikwanise kuita pasina imwe. Tine mazuva ekupenga senge mamwe masangano ese, asi pakupera kwezuva zvatinoita pano zvakakosha chaizvo. Vanhu vanouya kuno kuzoshandura maratidziro ehupenyu hwemhuri yavo yese uye tinosvika pakubatsira, ” Erica Vogt, Mutevedzeri Mutevedzeri Wemutungamiri weMabasa Ekutonga
“Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezvekushanda paHodges University itsika yakabatana uye inotsigira vashandi vedu. Ndiro boka rakazvipira uye rine hunyanzvi hwevanhu vandakambowana mukana wekushanda navo, ” John D. Meyer, DBA, Mutungamiri
Hodges Yunivhesiti mukana wakaenzana mushandirwi uye hausarure pahwaro hwerudzi, ruvara, chinamato, murume kana murume, zvebonde, zvebonde, kwakatangira nyika, zera, kuremara, kana chero humwe hunhu hwakachengetedzwa pasi pemutemo mune zvainoita zvekuhaya. Zvese zvinopihwa zvebasa zvinoiswa pakubudirira kupedzisa cheki yekutarisa uye bvunzo yemushonga.
Hodges Yunivhesiti yakazvimiririra, isingabatsiri, yunivhesiti inozivikanwa munzvimbo iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweFlorida iyo inonyanya kushandira vadzidzi vakuru.
Hodges Yegore Chengetedzo Chirevo (Clery Mutemo Ruzivo nePolisi) uye Mhosva dzeMatsotsi dzinogona kuwanikwa pa: Ruzivo rweVatengi Peji. Chirevo chekuchengeteka chinotsanangura Hodges Yegore Chengetedzo Chirongwa uye Crime Stats chirevo chinonyora huwandu nemhando dzematsotsi anoitwa kana padyo nekambasi gore rega.
Kusvikira padanho reGeneral Dziviriro Dhata ("GDPR") rinoshanda kwandiri, ndinobvuma kugadziriswa kweangu Dhata Dhata sekutsanangurwa neGDPR nekuda kwezvinangwa zvakatsanangurwa uye zvakapihwa mumitemo yaHodges, sekugadziriswa kubva nguva kusvika nguva. Ini ndinonzwisisa kuti mune mamwe mamiriro, ndine mvumo yekupokana nekugadziriswa kweangu Dhata Dhata. Ini ndinowedzera kunzwisisa kuti ndine mvumo yekukumbira (1) kupinda kuDunhu Rangu. (2) kugadziriswa kwekukanganisa kana kukanganisa uye / kana kudzima kweangu Dhata Dhata; (3) iyo Hodges inorambidza kugadziriswa kweangu Dhata Dhata; uye (4) iyo Hodges inopa Dunhu Rangu pachikumbiro mumhando inotakurika.